Resaky ny mpitsimpona akotry : mampihorohoro ny fihanaky ny asa fampihorohorona | NewsMada
Resaky ny mpitsimpona akotry : mampihorohoro ny fihanaky ny asa fampihorohorona
Mizara roa ny ezaka entina anazava ny tranga manodidina ny hetsika mahery vaika mitera-doza. Any Alemaina dia miezaka ny fitondrana amina fanambarana fa hetsika olona marary saina ilay fitifitifirana vary raraka nahafaty olona sivy, fa tsy tetika nomanina avy amina tambajotra fampihorohorona. Ao Frantsa kosa dia nikaroka ka nahangona porofo ny mpanao fanadihadina nampiharihary ny fandraisan’ilay hetsika tao Nice nitondra faafatesan’olona efatra amby valompolo.
Raha nampahafantatra ny tompom-pahefana any Bresil fa nisy fahatratraran’ny mpitandro filaminana asa fanomanana hetsika mahery vaika fanaovana fampihorohorona dia mazava fa tsy mahasakana ny mpanao an’izany tetika meloka izany ny fiampitana ranomasina. Ny fiangonana olona marobe nohon’ny hetsika ihaonana firenena maro toy ny Lalao Olympika dia misarika manokana ny mpampihorohoro, ny firefotry ny basy sy ny bomba dia manakoako eran-tany toy izay hamaron’ny karazan’olompirenena samy hafa izay. Tsy maniry loza fa tsy afaka mody tsy ahalala kosa anefa fa mananontanina eto amin’ny nosy ny fisehon’ny herisetran’ny fampihorohorona amin’ny novambra mandritran’ny Fivoriana Tampony karakarain’ny OIF. Azo antenaina fa efa miomana hisedra ny fisehon’izany ny fitondrana ary efa miofana amin’ny fanoherana an’izany ny mpitandro filaminana.
Tsy raharaha mora izany. Eto amin’ny nosy moa dia anisan’ny fivavahana mijoro ny finona silamo. Fady ny fanaovana safobe mantsina ka andehanana ametrahana ahiahy ny mpino silamo tsirairay tsy ankanavaka. Diso koa anefa raha noho izay dia andeha anjambena ka mody tsy ahafantatra ny mety fisin’ny mpino diso làlana ao anivon’ny rehetra. Diso làlana nohon’ny firaiketana amin’ny finoana tafahoatra, miray hina amin’ireo tsy mandefitra amin’ny rehetra tsy mitovy finoana aminy na ireo silamo miray finona aminy fa heveriny ho marivo salosana.
Ambony izany rehetra atao hoe finoana izany, ambony fa tsy ambonambony ny antoko-pivavahana misy an’ny tena. Lolohavina ambony koa anefa ny firenena ary arovana manokana ny filaminana eo amin’ny fiarahamonina. Aiza no mipetraka ny adidy maha amehana raha misy mifandipatra ny tranga atsy sy ny seho amin’ny ilany ? Tsy misy valy tena mazava momba an’io. Hany rariny dia izay nandraisana andraikitra kosa tsy maintsy hajaina. Raha tompon’andraikitra eo amin’ny firenena dia tsy afaka hiambo ny adidy nanomezan-toky noho izany.